Shiinaha LEDD620620 Saqafkii Dual Dome Dome Medical Operating Light oo leh soosaarayaasha xakamaynta gidaarka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Wanyu
LEDD620620 Saqafka Nalka Dual Dome Qalabka Shaqeynta Caafimaadka ee leh Xakamaynta Darbiga
LEDD620 / 620 waxaa loola jeedaa labanlaab domes saqafka iftiinka hawlgalka caafimaad.
Badeecad cusub, oo lagu casriyeeyay iyadoo lagu saleynayo badeecada asalka ah. Qolofka aluminium ee aluminium, qaab-dhismeedka gudaha ee la cusbooneysiiyay, saameyn ku-fiiqidda kuleylka wanaagsan. 7 qaybood oo laydh ah, wadar ahaan 72 guluub, laba midab oo huruud iyo cadaan ah, guluub OSRAM oo tayo sare leh, heerkulka midabka 3500-5000K oo la hagaajin karo, CRI ka sareeya 90, iftiimintu waxay gaadhi kartaa 150,000 Lux. Gudiga hawlgalku waa shaashadda taabashada LCD, iftiiminta, heerkulka midabka, CRI waxaa loola jeedaa isbeddelada isku xidhka. Gacmaha ganaaxa waxaa loo dhaqaajin karaa si dabacsan oo si sax ah ayaa loo istaagi karaa.
1. Gacanta Ka-hakinta Miisaanka-Miisaanka
Gacanta ka joojinta oo leh qaab-miisaan fudud iyo naqshad jilicsan ayaa u fududaanaysa xagal iyo dejin.
2. Waxqabadka hooska hooska
Qalabka korontada ku shaqeeya ee qaanso-qaadaha, naqshad nuxurka iftiinka dhowr-dhibic ah, 360-digrii oo isku-mid ah oo ku ifaya sheyga u fiirsashada, mala-awaal. Xitaa haddii qayb ka mid ah la xannibo, kaabidda alwaaxyo kale oo isku mid ah saameyn kuma yeelan doono hawlgalka.
3. Muuqaal Sare Nalalka Osram
Guluubka muuqaalka sare leh wuxuu kordhiyaa isbarbardhiga fiiqan ee u dhexeeya dhiiga iyo unugyada kale iyo xubnaha jirka bini'aadamka, taasoo ka dhigeysa aragtida dhakhtarka mid cad.
4. Beddelid isku mid ah
Heerkulka midabka, xoojinta laydhka iyo muujinta midabaynta iftiinka hawlgalka caafimaad ayaa si isku mid ah loogu beddeli karaa guddiga xakamaynta LCD.
Iftiiminta endoskope gaar ah ayaa loo isticmaali karaa qalliinka qalliinka ugu yar.
5. Hubinta Nidaamka Wareegga
Is barbar dhig, koox kastaa way ka madax bannaan tahay midba midka kale, haddii koox ka mid ah waxyeello gaarto, kuwa kale way sii wadi karaan inay shaqeeyaan, marka saameynta hawlgalka waa yar tahay.
Ka-ilaalinta korantada oo aad u badan, marka korantada iyo hadda ay ka sarreeyaan qiimaha xadka, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u jarayaa awoodda si loo hubiyo badbaadada nidaamka wareegga iyo nalalka LED-ka ee dhalaalaya.
6. Xulashada Agabyo Badan
Iftiinka hawlgalka caafimaad, waxaa lagu heli karaa xakamaynta darbiga, kontoroolka fog iyo nidaamka dib u soo celinta batteriga.
LEDD620620 Nalka Hawlgalka Caafimaadka
Hore: LEDD730740 Saqafkii LED Dual Madaxa Qalliinka Caafimaadka ee iftiinka hillaaca sare
Xiga: LEDD500 / 700 Saqafka Sare LED Labaad Madaxa Isbitaalka Iftiinka leh Shahaadooyinka CE
LEDB620 Wall Nooca Wall Laydhka Qalliinka ka Ma ...
LEDL100S LED Gooseneck Mobile Medical Imtixaanka ...
LEDL730 LED AC / DC hooska Fro Qalliinka Light Fro ...
LEDL260 CE Nooca Istaagsan ee La Oggolaaday Qalliinka Exa LED ...
LEDD620 Saqafkii LED Single Head light w ...
LEDD500 / 700C + M Saqafkii LED Double Qubbad Operatin ...